Fitohizan'ny hafatra : Re: Be fitiavana tokoa ve ilay Atr'Israely?
stahtam - 23/09/2016 06:33
eny azany eee... mi-bla-bla koa ilay "mpahay azy" hitakitako teny.
Fa raha samy tsy mijery ny mpi-bla-bla azany, dia tsotra :
aboahy eto ny TENY midika FIHAVANANA ao @ Torah/Baiboly ao.
Rahefa TSY afaky ny apetraka amina TENY iray ny concept iray, dia... bla-bla no dikany.
Miombo-kevitra ve isika @ io??
Ka ilay "mpahay azy hitanao mpi-blabala, izaho lazainao mi-blabla, ianao milaza fa tsy mahay; dia iza no hanazava hoe "midika fihavanana" ilay teny rehefa hita? Apetraho ny logique dia aoka samy hanaiky fa resaky ny moana sy ny marenina izany zavatra izany.
rhaj0 - 23/09/2016 18:58
Rehefa TSISY teny Hebreo (na Frantsay na Angglisy), mahateny tokana ny concept Fihavanana ry Stahtam dia tsory, f'aza mba miodikodina toa amboa-manenjika-foto-drambo eo aaa...
Ary rahefa TSY voafaritry ny TENY tokana ilay concept dia blah-blah-blah izany n'enao eee...
Io toa ny efa nivanitihana teto, hoe ilay resak'i ... Tsahtsam mvady, dia hoe:
- fenjao tsara ho'a "ilay zavatra lavalava mafonjafonja io ny lohany" ngo dia...
- Ilay ity ve no tianao tenenina, hozy i Tsahtsam, sady nampidininy ny patalohany.
- tsia, ilay "marteau" no tiako tenenina "
endriny - 24/09/2016 10:14
Fihavanana ve dia tsy hisy dikany @ teny hafa e. Fa isika fotsiny no mba te hanasongadin-tena hoe mihavana ny Malagasy. Tarigetrantsika Malagasy izany hoe mihavana toa landy izany. Fa eh eh. Miady foana e, ary tsy mifandevi-maty sy tsy mifampitsidika intsony hatramin'ny mpiray tampoho.
Raha ny marina dia Society sy Fraternity no tena hoe fihavanana, saingy ireo akademisianina moa nahay ka nataony hoe fiaraha-monina ny Society, kanefa ny fiaraha-monina tokony hoe social life na hoe associative way of living (dikan'ny teny anglisy tamin'izany faha 1800) io.
Saingy raha tsy mahadika azy ireo dia mba mahazo amboara aloha izany isika koa. Isika no nahita an'io voalohany.
Kanefa izao no tadidio, teny nentina nanalemena ny Malagasy hankato ny vazaha io teny Fihavanana io. Fa teto Madagasikara niady nifanaritaka ny isam-poko sy isam-paritra ary isam-bala tamin'izany. Ny tao an-dapa mifamono, ny miaramila miady ho 13 voninahitra, ny mpino mandripaka ny mpamosavy, ny tsy mpino mamarina ny mpino any an-kady, ny te hiteny frantsay nifandrafy tamin'ny te ho anglisy, sns
Dia aiza amin'ireo izany fihavanana izany.
rhaj0 - 24/09/2016 14:27
Raha ny fiaraha-monina malagasy FAHINY kosa aloha no dinihina, dia, raha ny fahatakarako azy, dia :
Misy tokoany io concept Fihavanana io ao @ Malagasy.
Marina fa misy koa ny ady an-trano, toa ny tany @ firenena hafa rehetra, ady an-trano izay tarihin'izay debadeba ao; fa rahefa ao anaty fianakaviana, miitatra mpiray monina ao, dia misy tokoany ity hoe Fihavanana.
Jereo ny rakitr'i Flacourt (1610s) ohatra, izay nahita dia nitatitra ny fiainana andavanandron'ny Malagasy t@ fotoan'andron'ny taloha.
Flacourt page 86: Pour ce qui regarde l'hospitalité, ils l'ont entre eux, s'entre-assistent de vivres les uns des autres, et ne denient point à manger à ceux ils enqui leur demandent, quand ils en ont les moyens, s'ils mangent, ils départent ce qu'ils ont à tous les autres, et le plus souvent ils ne gardent rien pour eux, estimant cela à l'honneteté, ce que pratiquent tant grands que petits, par une coutume ou inclination naturelle.
Dia resaho anie izay zokiolona ao aminareo ao, fa dia misy tokoany izany firaisam-po aman-tsaina sy fanahy teo @ Malagasy izany talohaloha teo.
Ary sahy milaza aho, fa izany dia mbola (misy) tavela ao @ ati-panahin'ny Malagasy (sasany) ankehitrio.
stahtam - 26/09/2016 07:48
... Tsahtsam mvady, dia hoe:
Dia mba anontaniako anao e! ilay vadin'i Tsahtsam izany mbola tsy nahay nanonona hoe "marteau" mihitsy raha raha tsy t@ io fotoana io? Ny mpanondro "io" mantsy @ teny malagasy dia milaza zavatra hita maso (fa tsy hoe mbola vao haseho akory). Ngo dia mihevitra ny olona ho zazakely aza ianao dia hoe amoronako blabla eto ity dia miesona? maika loatra angamba ny namoahana ilay parabole dia nohehezin'ny akoho tokan'anaka e!
Fa ny tena resaka dia tahatahaka izao e: rehefa tsy takatra ilay hoe maninona ny Jiosy no tsy mihinana voaloboka tsy... dia aleo boroboriana hoe: blabla ny anareo e, hevitry ny l'an zero e! ridicule e! useless e! Ianao no tsy mahita izay fidirana ao dia mba ekeo hoe tsy tafiditra aho fa izaho ange ka tsy hamoaka izay zavatra fantatro ao na hisikotra toa ny misikotra parasy eo aza ianao.
endriny - 26/09/2016 12:41
Ilay fihavanana izany dia tsy hoe tsy nisy akory fa nisy saingy telo reny ihany no fototry ny fihavanana teo @ Malagasy : iray taranaka, iray foko, mpifamaky ra.
Ka ireo no hitan'i Flacourt satria mbola kely ny foko tamin'izany 1600 izany.
Fa vao nandalo ny vola, dia tao anatin'ireo foko ireo ihany dia nisy olona na antokon'olona nivarotra ny havany atao andevo ho any an-dafy. Ohatra i Massavana. Izay no nahatonga ilay hafatra hoe aleo very tsikala sy ny varotra tsy raikitra, satria hay na varotra tsy raikitra aza dia naha raikitra ady taloha.
Fanambadiana tsy raikitra dia lasa ady ifamonoana.
Ka ireny rehetra ireny no nahatarika ny olon-kendry, olobe hanorina ireo ohabolana hita ireo, fa tsy hoe izay no fiainana nisy, fa izay no tanjona.
rhaj0 - 26/09/2016 13:08
Ny fahazoako ny an'i Endriny izany, dia ny Fihavanana (izay soritan'ireo ohabolana sy oha-pitenenana Malagasy) dia hoe, toatoa ny "faniriana" na "tanjona" ilay izy fa tsy zava-nisy.
Izaho kosa mihevitra fa niainana ilay izy, ary toa ny tavela ao anatintsika lalina ao. izaho mihevitra fa indraidray dia mivoaka tokoany, ilay fandraisana ny andaniny izay eo ho "havana".
Raha hoy i Endriny hoe, ny vola sy ny ady sy ny famarinana ho andevo ny "havana", dia ... ekeko fa mety marina tokoany izany. Nefa, raha ny fahatakarako azy, izany TSY midika hoe, TSISY ilay "fihavanana" ao am-po/saina/fanahy Malagasy, ao @ ilay soatoavina gasy
Ohatra izao, ao Amerika Atsimo koa (toa Peru sa Venezuela izy teo), dia mety hoz'ianao hoe, ny vola sy petrole sy ny guerilla ve "soasoa" ?? Nisy fandaharana t@ TV hitako indray mandeha, fa hozy ilay rangahy ONG izay nikasa hanao asa soa tany ambanivohitra hoe, sioka tokana fotsiny no nataon'ilay olombe fa dia tafavory olona niray ary nanome tanana hanampy azy (hanampy ny mponina tao) ary nandray an'Ingahy ho toa ny "havany" koa.
Izaho "mino" fa any Dago, dia mbola misy koa izany. (I Endriny izao no mahalala kokoa, fa izaho moa tan-drenivohitra sy touriste t@ tany)
endriny - 27/09/2016 06:49
Izaho tsy niteny hoe tsy nisy fihavanana fa efa ireo nambarako aloha ireo ireo fototra telo nisehoan'ny fihavanana. Saingy ny ankoatr'izay dia saritaka no misy ka lasa atao resaka tanjona fotsiny ny fihavanana sisa.
Mbola misy ve ny fihavanana ankehitriny? Efa manitsaka izay vao manao aza fady no betsaka. Na eo amin'ny fiangonana, na politika na fiarahamonina dia fihavanana mila tambiny avokoa. Ka raha izay no atao hoe fihavanana, havako raha misy patsa dia izay izany koa, be dia be ny fihavanana raha izany, ary tsy nisy ny adilahy politika na adim-pinoana teto na aditany raha nisy fihavanana. Ahoana ireo malaso sy dahalo any atsimo?
Ny hitako tena misy fihavanana ankehitriny dia eo amin'ny fifaninana hiditra ho mpiasam-panjakana. Satria ny havana ihany aloha no miditra voalohany.
rhaj0 - 27/09/2016 13:32
Misy petra-javatra roa kosany ee... ny raharaha iarahana miaina sy monina ao, sy ny raharaham-pirenena. Tsy tadidiko fa tsy Andrianampoinimerina ve moa iliay niteny fa "ny raharaham-pirenena TSY ahalalako havana" ??
RBNIR - 28/09/2016 09:08
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana , mba tsy ho very izay rehetra mino Azy , fa hanana fiainana mandrakizay . » (Jao.3:16)
Hoy ny teny hoe "Fa toy izao" : izany hoe te hanasongadina Andriamanitra,
Hanasongadina inona.? izao ny tohiny nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao....Tiany hasongadina ny haben'ny fitiavany an'izao tontolo izao.....
Fa nahoana no lehibe? satria ny hany tokana mba nanany no nomeny (ILAY ZANANY LAHY TOKANA) mba tsy hahavery ny olona fa mba hananan'ny olona indray ilai fiainana mandrakizay...
===>ZAVA-DEHIBE EO IMASON'ANDRIAMANITRA IZAO TONTOLO IZAO ka nahavitany nahafoy ILAY ZANANY LAHITOKANA....
TIANY IZAHO SY IANAO MBA HANANA FIAINANA MANDRAKIZAY FA TSY FIAINANA 80 TAONA NA 100 TAONA FOTSINY.......
MARO IREO EFA NIJORO VAVOLOMBELONA FA VELONA MARINA TOKOA I JESOSY TAORIAN'NY NAHAFATESANY...
IZAHO KOA DIA MANAMARINA IZANY ANKEHITRINY SATRIA TANTERAKA AMIKO 100% ITY TENY ITY....
16 Ary Izaho hangataka amin’ ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra [Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] hafa mba ho eo aminareo mandrakizay,
17 dia ny Fanahin’ ny fahamarinana, Izay tsy azon’ izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa hianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo.
18 Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankat? aminareo Aho.
AZA MANAO TSINONTSINONA NY FITIAVAN'ANDRIAMANITRA ISIKA FA MANOMEZA VONINAHITRA AZY.....
rhaj0 - 28/09/2016 14:26
Io resak'i RBNIR io ambony io moa tena efa hain'ny rehetra (pli-vava), afaka averimberina na dia mikimpy azany ny maso (sy ny saina).
Fa ndao hoe halalinina kely :
1- I Andrmntra izany no "namorona izao tontolo izao", na ireo "mino" izany na ireo "tsy mino".
2- Ka "anasongadinany" ilay Fitiavany Lehibe an'izao tontolo izao, dia tsy iza fa ireo "mino" SY ireo "tsy mino", dia .... nafoiny ny Zanany-Lahy-Tokana, hamonjena ireo "mino" IHANY.
RBNIR - 28/09/2016 14:58
Inona moa no nahatonga ny olona rehetra ho faty? « Fa fahafatesana no tambin'ny ota; ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika. » (Rom.6:23)
Dia ahoana izany f'angah moa ny olona rehetra manota avokoa ? ahoana ny zazakely? « Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra; » (Romana 5:12)
Hereditaire ilay ota, "dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao....
Tsy hoe ny "tsy mino irery no "manota", Fahadisoankevitra izany fa na ny mino aza dia mbola mpanota ihany koa.....
Ny atao hoe famonjena kosa dia ny fanesorana ilay ota ao anatin'ny olona......Tsy ny mpino rehetra akory dia hovoavonjy avokoa fa izay voaisotra ho afaka amin'ny ota ihany.....
« Ary fantatrareo fa Izy no naseho hanaisotra* ny ota; ary tsy mba misy ota ao aminy. [* Na: hitondra] » (1 Jaona 3:5)
« Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota; izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala Azy. » (1 Jaona 3:6)
Secret izany rhajo a!!! Na dia ny mpino aza ange mbola betsaka ny hatahorana mafy e! Hoy Jesosy.....
Matoa tsy mahavita ny sitrapon'Andriamanitra dia satria mbola ao anatiny ilay OTA izay mbola manandevo azy.....
endriny - 28/09/2016 15:08
Dia io izao no itarafana ilay hoe tanjona ilay lafatra fihavanana, fa tsy voatery hoe tena niainana akory. Dia misy koa ilay teny hoe na amboako na amboan'olona rehefa vandana dia kary.
Ka ireo dia mbola taratry ny adilahy politika ankehitriny izay mitady foana an'ity fampiahavanana ity. Saingy tsy nahita irika mihintsy, na ny irika amin'ny adilahy no hita. Eo indray aloha
endriny - 28/09/2016 15:13
ZAVA-DEHIBE EO IMASON'ANDRIAMANITRA IZAO TONTOLO IZAO ka nahavitany nahafoy ILAY ZANANY LAHITOKANA....
Raha misy olona manao sorona olom-belona, na zaza vao teraka sns, dia hivavaka aminy ve ianao ary hiteny ianao fa izy no be fitiavana indrindra.
Ireto mpivady nanolotra ny zanany vavitokana natao sorona tao Miary ireto izao ve dia mitovy lanja sy sata amin'io andriamanitr'iRBNIR io
rhaj0 - 28/09/2016 15:18
rhaj0 Tsy tadidiko fa tsy Andrianampoinimerina ve moa iliay niteny fa "ny raharaham-pirenena TSY ahalalako havana" ??
Izay Fihavanana izay kosa ve tsy toa ny @ izao fotoan'androny izao hoe, libertE sy dEmokrasia... tsy tena hoe efa iainana, fa "tanjona" sy "soatoavina" ary ezahina ho tandremana toa ny anakandriamaso??
rhaj0 - 28/09/2016 15:23
rhaj0 Ka mba ahoana izany ity hoe "Fitiavana-Lehibe", mba misy ve izany ho an'ireo "Tsy-Mino" ????
Tsy mila miodikodina toa amboa-manenjika-foto-drambo io ry RBNIR, fa rahefa TSISY valiny io avy @ RBNIR, dia mazavabe izany fa :
TSISY izany ilay "Fitiavana-Lehibe" ho an'ireo "Tsy-Mino" ee...
Koa na ilay "Ftiaavana Lehibe" miorina @ "fanaovana sorona ny zanaka" azany, araka io notsindrian'i Endriny io, dia TSY "fitiavana" izany (manao sorona) izany (amiko) eee...
Dia ao ianao sy ny pli-vava-nao ry RBNIR. Averimbereno ao foana ry RBNIR fa mety hiova ihany i Andmntra mihaino ny toreo-nao ao, ary mety mba "haneho Fitiavana" ihany farany aaa...
RBNIR - 29/09/2016 04:44
Tsy afaka miteny afatsy izay nampialazaina ahy aho ry rhajo,
Tsy maninona raha pli vava no andraisanao azy fa ny marina dia tokana ihany ka tsy afaka ny hiovahova....
rhaj0 - 29/09/2016 12:38
RBNIR Tsy afaka miteny afatsy izay nampialazaina ahy aho
ka ampiasao ilay coco (interinety ohatra) izany, fa tsy dia izay "ampitenenina anao" dia "averinao", tsy asianao fieritreretana na ny pitiny ao...
endriny - 30/09/2016 06:08
Ny fahalalako azy dia toa izao foana ny fihavanana hatramin'izay. Izay iray fasana sy iray taranaka ary iray foko sy mpifati-dra ihany aloha no mpihavana.
Ka izay indrindra no nahatonga an'ireo toerana maro raha tsy voahodidina hadivory sy hadifetsy dia voahodidina tamboho. Ny an'ny sasany aza moa tamboho roa sosona mihintsy. Araka ny tantara moa izany dia ny olona taloha rehefa mandeha na mita Tanana fotsiny ihany aza dia tsy maintsy mitondra lefona na tsolo miandahy miambavy.
Tamin'ny fampandrian-tany nataon'ny vazaha no tena nivohizana an'io fihavanana io, mba andaminany ny tany izay nananosarotra tokoa satria ady foana no nisy teto nanomboka ny faraparan'ny taonjato faha 19 ka hatramin'ny 1950. Ry mopera no tena nomena ny ezaka nanatontosa an'io.
Fa ny fihavanan'ny Ntaolo dia mifototra fotsiny amin'ny hoe: "Velona iray trano, maty iray fasana". Izany hoe izay iray trano ihany aloha no mpihavana, ary manodidina nantsoina manokana hoe mpiray vodirindrina, Ka ny nifandraisana tamin'ny mpiray vodirindrina dia ny tapatapak'ahitra isan-kariva. Sira aza tsy nifampizarana na nifanakalozana tamin'izany ka nahatonga ilay fiteny hoe: "izay manan-tsira mahay mahay mahandro".
Ny Katolika moa no tena nivohy ny fampianarana teto tamin'ny andron'ny fanjanahan-tany, ka izy no tena nampianatra sy nanaparitaka an'io teny hoe fihavanana io, mba ankatoavan'ny endizena ny voanjo ahazo faka eto Madagasikara. Ka na efa lasan'ny voanjo aza ny tanin'ny tena, dia ny endizena ihany no tenenina hoe: "Fahendrena ny fanajana vahiny". Dia ilay endizena ihany no asainy miasa ilay naoron'ny voanjo. Miasa tsy misy karama io no sady voan'ny karavasy a, kanefa ny tena tsy maintsy mitondra vatsy ho entina miasa ny tanin'ireo voanjo ireo, fa izy tsy nanome sakafo, fa fihavanana ihany no nomeny...
rhaj0 - 30/09/2016 13:30
Tena mba tsy miombo-kevitra @ Endriny kosa aho @ ity resaka Fihavanana ity. Izaho mihevitra fa tsy mijanona @ "Velona iray trano, maty iray fasana" ilay firaisa-miaina, fa miitatra @ "Trano Atsimo Sy Avaratra".